'Uthethisa' ozakwabo ngokuzakhela igama elibi emlamdweni weKaizer Chiefs - Impempe
‘Uthethisa’ ozakwabo ngokuzakhela igama elibi emlamdweni weKaizer Chiefs
URamahlwe Mphahlele weKaizer Chiefs no-Augustine Mulenga waMaZulu FC
“Asikho isidingo sokucasha ngesithupha ngoba abekho abanye abadlali abazokhipha iKaizer Chiefs odakeni ebishe kulo kulezi zinsuku ngaphandle kwabo bonke laba abasemabhukwini ayo manje.”
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule inhloko yabaqeqeshi kwiChiefs, uGavin Hunt, uqinisekise ukuthi amathemba akhe ngokuhola leli qembu akuRamahlwe “Rama” Mphahlele.
Kusobala-ke ukuthi akazange ashaye eceleni uHunt ngesinqumo sakhe ngoba la mazwi angenhla ashiwo nguyena lo mdlali ephawula ngokunengwa ukuthi leli qembu selishaywe imidlalo emithathu ilandelana emiqhudelwaneni eyahlukene.
Lapha uMphahlele uxwayisa ozakwabo ngokubaluleka bokuvuka bazithathe kwazise umlando omude weqembu uyonakala okuyinto okungafanele bavume yenzeke kukhona bona emabhukwini eChiefs.
Iqalwe yi-Orlando Pirates emdlalweni womkhaya iyishaya ngo 2-1 kwalandela impoxo yokuwashiswa ijezi yiqembu elidlala kwiGladAfrica Championship, iRichards Bay kwiNedbank Cup ngomphumela ofanayo.
Kamuva nje Amakhosi aphinde aguqiswa AmaZulu ngawo belu u 2-1 yize uMphahlele ekholwa ukuthi babe nebhadi nje kulo mdlalo.
“Akumnandi impela ukuba kulesi simo. Emdlalweni wamaZulu ngikholwa ukuthi umphumela awushayi khona uma uzobheka indlela esidlale kahle ngayo. Kube amaphutha nje lapho nalapho.
“Yize ngikhuluma kanje kodwa eyokuthi sesishaywe imidlalo emithathu ilandelana kufanele isenze sonke sizinuke amakhwapha singabadlali. Ngeke phela!
“Umlando uyohlale umile ukuthi kwakukhona thina iChiefs iphenduka ihlaya ezweni ngakho lokho kukodwa kufanele kusenze siyeke ukuzikhotha amanxeba kepha sibumbane kakhulu kunakuqala silwe,” usho kanje sakubathethisa ozakwabo uMphahlele.
Ujabule kakhulu uMphahlele ngokubuya kwakhe ekulimaleni ngoba sekuzovela nethuba lokuthi afake isandla ekuhlengeni iqembu njengoba izinto zingahambi kahle kulona.
Amakhosi azokwamukela iSuperSport United evutha bhe kulezi zinsuku koweDStv Premiership ngoMgqibelo ngo-3 ntambama, e-FNB Stadium.
“Akukho esingakwazi ngeSuperSport ngakho kufanele sifike emdlalweni silunge ngakho konke esinakho ngoba uma kungenjalo sizoqhubeka nokulahla amaphazu.
“Bayiqembu elihlale njalo lisinika inkinga. Babophele inqwaba yabadlali beqophelo kodwa angikhali kangako ngoba nathi sinabo abadlali abangayimela yonke imibuzo ezobe iza neSuperSport,” kusonga lo mdlali oseke wadlala kwiMamelodi Sundowns nakwiMoroka Swallows.
Previous Previous post: Ivuswe yinduku emaqandeni iSuperSport United
Next Next post: Yimbi le ndawo esikuyo – Steve Barker